PressReader - Ilanga: 2018-11-05 - UMBONO WOMHLELI
Ilanga - 2018-11-05 - Bono -
UDABA obelusematheni ezinkundleni zokuxhumana kule mpelasonto esiphuma kuyona, kufanele futhi, yisinqumo sejaji laseNkantolo eNkulu yaseGoli sokuthi nxa insizwa isike yaqala nje ukulobola intombi, lokho kusho ukuthi sebeshadile.
Kuvela ukuthi kakukhathalekile noma lungakaze luphume udwendwe, kukikize izalukazi, umakoti athelwe ngenyongo angeniswe ekhaya.
Lesi sinqumo esishaqisayo sikhishwe yijaji ecaleni ebelifakwe uNkz Lerato Sengadi, obefuna ukumisa umngcwabo womculi we- hip hop, uJabulani “HHP” Tsambo obehlekisana naye, obuhlelwe ngabazali bakaTsambo eMahikeng, eNorth West.
UTsambo, obebuye aziwe ngoJabba, kubikwa ukuthi wazibulala cishe emasontweni amabili edlule emzini wakhe eGoli. UNkz Sengadi utshele inkantolo ukuthi uTsambo wathumela abakhongi kubo eGoli wamlobola ngo-R30 000, okwakuyingxenye yelobolo, lokho okumenza abe ngumakoti ngokwesintu ( customary wife).
Uyise kaJabba, uMnu Robert Tsambo, uphike wama ngentaba, wathi njengomndeni wakwaTsambo, kabakaze bamemukele ekhaya uNkz Sengadi. Uthe ngokwakhe le ntokazi, phambilini, yake yaba yingoduso yendodana yakhe, kodwa base behlukene.
Sekuwumlando manje ukuthi ijaji limvunile uNkz Sengadi, kodwa lanquma ukuba umngcwabo kaTsambo uqhubeke njengoba bekuhlele umndeni eMahikeng.
Okunye okuvuse amehlo kulolu daba wukuthi abameli abebemele izinhlangothi zombili - olwakwaTsambo nolwakaSengadi - bekungabamhlophe abelungu, esikhathini lapho izazimthetho zakithi ezimpisholo zisha amashushu, zikhala ngokuthi izinkampani nohulumeni, babancisha amathuba omsebenzi ngokuqasha ezabelungu.
Kuleli sonto esiphuma kulo nje, idlanzana labammeli abampisholo lisungule inhlangano ezobamela, ehlose ukulwa nokungawutholi umsebenzi kwabameli abansundu. Ukungaqashwa kwabameli abampisholo ngabantu bakubo ukuba babamele kulolu daba, kuvuse amehlo ezinkundleni zokuxhumana.
Ukubuyela odabeni olusezithebeni, isinqumo sejaji sishiye ukudideka nemibuzo eminingi, futhi kungenzeka ukuthi sifake itwetwe emasokeni ahlale elobola izingane zabantu, adlulele phambili engawuphethanga umsebenzi.
Lesi sinqumo singahumusheka ngokuthi kungenzeka ukuthi kukhona abanumzane bemizi yabo ababengamasoka besebasha, abanesithembu kodwa bengazi.
Phela baningi abake balobola emizini yamanye amadoda, kodwa bashiya phakathi sebekhangwe ngezinye izimbali. Kuthiwa intombi kayaliwa; ngabe lesi sinqumo singasho ukuthi owesifazane owalotsholwa phambilini, washiywa engatshelwanga ukuthi ucu kalusahlangani entanyeni, angakwazi ukuyobanga ifa nenkosikazi yephepha ngesizathu sokuthi naye uyinkosikazi kamufi ngokwesintu?
Isinqumo sejaji - sishiya imibuzo eminingi nokudideka - ngakho kuzofanele sidluliselwe enkantolo yomthethosisekelo ngokushesha ukuze yenze isinqumo esiwujuqu ngalolu daba. Okwamanje, labo abajwayele ukuhlala beyovela emizini yamadoda ngemali yebhonasi ngoZibandlela (December), kuzofanele bacabange kahle ukuthi lokhu abakuqalayo bazokuphetha yini ukuze bangazitholi ngelinye ilanga sekuthiwa banesithembu bona bengazi.